BEST Education Center - IT & Japanese Language Center
ကွန်ပျူတာ၊ ဂျပန်ဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်သာသာ သင်တန်းကျောင်း
HOME PAGE ပင်မစာမျက်နှာ
ONLINE COURSES online သင်တန်းများ
E-mail: bestjapanesecenter@gmail.com | Call: : +959773728028 | Country : Myanmar
မိမိအနာဂါတ်အား အကောင်အထည်ဖော်နေသူ လူငယ်များအတွက် အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်၏အနာဂါတ်တိုးတက်ဖို့ BEST Education Center ဖြင့်ချိတ်ဆက်စို့
သင့်အနာဂါတ်အတွက် BEST မှအကောင်းဆုံးအထောက်အပံပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လိုက်ပါ
BEST Education Center မှကြိုဆိုပါတယ်
မိမိအနာဂါတ်အား အကောင်အထည်ဖော်နေသူ လူငယ်များ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပရှိ Company ကြီးများတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး လစာကောင်းကောင်းဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင် လိုသူများ၊ပညာရပ်တစ်ခုအား အမှန်တကယ် တက်မြောက်လိုသူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုပ်(သို့မဟုတ်)ကျောင်းဖြင့်သွားရောက် လိုသူများ၊ အိုင်တီ နည်ပညာများအား လေ့လာလိုသူ လူငယ်များ၊ ဂျပန်စာကို အခြေခံမှစတင်လေ့လာလိုသူများ၊ သင်ယူလေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားပြီး သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိနေသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် လူတိုင်းလူတိုင်း၏ အနာဂါတ်တိုးတက်ရေးအား အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်စာကို level တိုင်းအတွက်4skill + Kanji လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ သင်ခန်းစာတိုင်းအတွက် စာမေးပွဲများ စစ်ပေးခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများမှတစ်ယောက်ခြင်း အသေစိတ်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခြင်း၊ အပြန်အလှန်စကားပြောလေ့ကျင့်ခြင်း၊ JLPT စာမေးပွဲများတွင် အကောင်းဆုံး ဖြေဆိုနိုင်ရန် မေးခွန်ဟောင်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ IT သင်တန်းများအတွက် စာသင်ခန်းပုံစံကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ကဲ့သို့ သင်ကြားပေးခြင်း၊ Project များရေးသာစေခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း စသောနည်းလမ်းများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
တန်းခွဲတစ်ခုအားတက်ရောက်ပြီး ကောင်းစွာနားလည်ခြင်းမရှိခဲ့ပါက မိမိတက်ရောက်နေသော level နှင့်တူညီသည့် မည်သည့်တန်းခွဲတိုင်းတွင်မဆို အခမဲ့ ပြန်လည်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများမှ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် အသေးစိတ်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း၊ ဂျပန်စာ နှင့် IT နည်းပညာများအား တစ်နေရာထဲမှာ လေ့လာနိုင်ခြင်း၊ သင်တန်းကြေးသက်သာစွာဖြင့် သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ သင်တန်းများပြီးဆုံးပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တစ်ပါတည်းချိတ်ဆက်နိုင်ခြင့်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
BEST Education Center ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
သင်၏ အကောင်းဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိနေသူတို့အတွက် BEST Education Center မှ Online Class သင်ခန်းစာများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
July/2018 June/2018 အတွက် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းချိန်များ
Online မှ တက်ရောက်နိုင်သော သင်တန်းများ
online ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်သော သင်တန်းများအားလုံးကို ကြည့်မည် ဘယ်လိုပုံစံမျိုး သင်ကြားပေးမှာလဲ ?
BEST Education Center ကိုဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားကြတာလဲ ?
BEST Education Center ၏ facebook page တွင် review ရေးထားသူတို့၏ review များဖတ်ကြည့်ယုံဖြင့် စိတ်ဝင်စားမူ့များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
​​ဝေ တို့လို​ကျောင်​းတက်​​နေတဲ့ သူ​တွေ​တောင်​ ဒီ​နေရာ​လေးက​နေ ​လေ့လာသင်​ယူ​နေရတုန်းပါ.. ​လေ့လာခွင်​့ သင်​ယူခွင်​့​တွေရ​နေတဲ့အတွက်​ကိုပဲ ​ကျေးဇူးတင်​​နေမိ​တော့တာပါပဲ
ရင္ ခုန္ သံ
​အရမ်း အရမ်းကိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် အခြေခံကျ ပြီး နားလည်လွယ်ပါတယ်
Kanji နဲ့ Vocab ​လေး​တွေ 5လုံးဆီ ​ကျေးဇူးပြု၍ ပုံမှန်​​လေးတင်​​ပေးပါခင်​ဗျာ........ အရမ်​းကိုအဆင်​​ပြေပြီ ​ကျေဇူးလည်​းအရမ်​းတင်​ပါတရ်​ခင်​ဗျာ........... Best ဒီထက်​ပိုမို​အောင်​မြင်​ပါ​စေဗျာ.......
ကျွန်တော်တို့လို ဂျပန်ဘာသာကို သင်ယူ သင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသား/သူ တွေအတွက်တော့ ဒီနေရာလေးဟာ အကောင်းဆုံးနေရာလေးပါဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်နေလျက်ပါ
Phan Phyoue Lat
တနင်္လာ တနင်္လာနေ့တိုင်း သင်တန်းကျောင်းပိတ်ပါသည်
အင်္ဂါ 09:00 AM - 8:00 PM
ဗုဒ္ဓဟူး 09:00 AM - 8:00 PM
ကြာသပတေး 09:00 AM - 8:00 PM
သောကြာ 09:00 AM - 8:00 PM
09:00 AM - 8:00 PM Closed Now
တနင်္ဂနွေ 09:00 AM - 8:00 PM
BEST Education Center ကို 2016 ခုနှစ်တွင် ဆရာမဒေါ်နှင်းအေးဝေ မှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ BEST Education Center အားတည်ထောင်ရသော အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဂျပန်စာကို အခြေမှ စတင်ပြီး စနစ်တကျလေ့လာလိုသူတို့အတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ BEST Education Center မှ မိမိတိုင်းပြည်၏ တိုးတက်ရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါ၀င်ကူညီလိုပါသည်။
Hnin Aye Wai (CEO & Founder) BEST Education Center
Kyaw Min Htwe (Co-Founder) Founder of BEST IT Group Webstite Services Co.,Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့ တည်နေရာ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်းနှင့် ဗဟိုလမ်းထောင့်၊ လှိုင်စျေးအရှေ့၊ လှိုင်မြို့နယ်။ တိုက်အမှတ်(၅)၊ ပထမထပ်(1B)၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
Call: 09773728027, 09773728028
2018 All Rights Reserved | Power by: BEST IT GROUP